Todo eReaders yemawebhusaiti yakavambwa muna2012, apo vaverengi vebhuku vaive vasati vanyatso kuzivikanwa kana kujairika uye mumakore ese aya yave chirevo mukati mepasi revaverengi vemagetsi. Iyo webhusaiti iwe yaunogona kuziviswa yenhau dzichangoburwa munyika yeReaders, izvo zvazvino kuburitswa kwemhando dzakakosha dzakadai seAmazon Kindle naKobo uye nezvimwe zvidiki zvinozivikanwa zvakadai seBq, Likebook, nezvimwe.
Isu tinopedzisa zvirimo ne nyanzvi yekuongorora kifaa. Isu takanyatso kuyedza maReaders kwemavhiki kuti titaure chiitiko chaicho chekuenderera mberi kuverenga nemumwe wavo. Pane zvinhu zvakakosha sekubata uye nekushandisa izvo zviri kuenda kutsanangura chiitiko chakanaka chekuverenga nechishandiso chisingakwanise kuverengerwa kana iwe uchingoona chishandiso uye uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinacho kwemaminetsi mashoma.
Isu tinovimba mune ramangwana rekuverenga kwedhijitari uye maReader semidziyo uye inotsigira pazviri. Isu takateerera kune ese nhau uye matekinoroji matsva ayo akaverengerwa mumidziyo iri pamusika.
Todo eReaders edhisheni timu yakaumbwa neboka re nyanzvi muReaders nevaverengi, zvishandiso uye software zvine chekuita nekuverenga. Kana iwe zvakare uchida kuve chikamu chechikwata, unogona titumire iyi fomu kuti uve mupepeti.
Ini ndiri Project Manager kuActualidad Blog, ndinoda eReaders uye mudziviriri wekutsikiswa kwedhijitari, ndisingakanganwe yechinyakare 😉 Ndine Kindle 4 uye BQ Cervantes 2 uye ndinoda kuedza iyo Sony PRST3
Chinangwa changu chazvino ndechekuyananisa fungidziro netekinoroji kubva panguva yandiri kurarama. Nekuda kweizvozvo, kushandiswa uye ruzivo rwezvigadzirwa zvemagetsi zvakaita seE-Reader, izvo zvinondibvumidza kuti ndizive dzimwe nyika dzakawanda ndisina kubva pamba. Kuverenga mabhuku kuburikidza neichi chishandiso kuri nyore uye kugadzikana, saka hapana chimwe chinhu chandingangoda kunze kwehunhu E-Reader.
Mupepeti uye muongorori wegeek. Anoda zvigadzirwa uye tekinoroji. "Ini ndinofunga zvinokwanisika kuti vanhuwo zvavo vasarudze kuita zvinoshamisa" - Elon Musk.
Asturian, anodada kubva kuGijon kuva chaiko. Technical Injiniya murudo nevaverengi kubvira pavakabuda. Kindle, Kobo, ... Ini ndinoda kuziva uye kuyedza akasiyana e-mabhuku, nekuti ese akasiyana uye ivo vese vane zvakawanda zvekupa.
Sezvo ini ndawana Kindle PaperWhite yanga iri yangu yekuenda-kune gadget yekuverenga usati warega rimwe zuva richipfuura. Icho chinenge "fanaticism" yeReaders ini ndichaedza kuchinjisa kuTodo eReaders.